Bossam: Steal the Fate – Gold Channel Movies
May. 01, 2021 MBNwavve
1Season 1 May. 01, 2021
Episode 1 May. 01, 2021
Episode2May. 02, 2021
Episode 8 May. 23, 2021
Episode 11 Jun. 05, 2021
Episode 12 Jun. 06, 2021
Episode 14 Jun. 13, 2021
Episode 15 Jun. 19, 2021
Episode 16 Jun. 20, 2021
Episode 17 Jun. 26, 2021
Episode 18 Jun. 27, 2021
Episode 19 Jul. 03, 2021
Episode 20 Jul. 04, 2021
Bossam: Steal The Fate 2021(보쌈-운명을 훔치다)
အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ နန်းတွင်းကားအသစ်စက်စက်လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားနာမည်က Bossam: Steal The Fate ပါ။ Bossam ဆိုတာက ဂျိုဆွန်းခေတ်မှာ ပြန်လည်ထိမ်းမြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို ခေါ်ဆိုပါတယ်။ ဂျိုဆွန်းခေတ်မှာ မုဆိုးမတွေဟာ ပြန်လည်လက်ထပ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ လူပျို သို့မဟုတ် မုဆိုးဖိုတစ်ယောက်က ပြန်ပေးဆွဲခိုးယူမှ လက်ထပ်ခွင့်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကို Bossam လို့ခေါ်တာပါ။ တချို့ ပြန်ပေးဆွဲမှုတွေက ကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီး တချို့ကတော့ အလိုမပါပဲ ပြန်ပေးဆွဲခံရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
Ba-Woo (Jung Il-Woo) ဟာ လောင်းကစားလုပ်၊ သေရည်သောက် ပျော်ပါးမူးယစ်နေတတ်တဲ့ လူပေါ်ကြော့ကာရိုက်တာပါ။ ငွေရဖို့ Bossam ပြုလုပ်တဲ့ အဖွဲ့မှာလေ့ကျင့်နေတဲ့သူပေါ့။ ငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းက လျှို့ဝှက်ကြံစည်မှုတစ်ခုမှာ ပါတယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲခံရလို့ ဇစ်မြစ်မြှုပ်ပြီး နေနေသူပါ။ ဒီလိုနဲ့သူဟာ မင်းသမီး Soo-Kyung (Kwon Yuri) ကိုမှားယွင်းပြီး ပြန်ပေးဆွဲမိပါတော့တယ်။
မင်းသမီး Soo-Kyung ဟာ ဘုရင် Gwanghae ရဲ့သမီးဖြစ်ပြီး Ba-Woo ရဲ့ ရန်သူတော် Lee Yi-Cheom ရဲ့ချွေးမပါ။ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေကြား ချစ်ရသူရဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူကို လက်ထပ်ခဲ့ရပေမဲ့ မင်္ဂလာဦးညမှာပဲ ခင်ပွန်းသည်သေဆုံးပြီး မုဆိုးမဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မှားယွင်းပြန်ပေးဆွဲခံရရာမှာ Ba-Woo ရဲ့တွေ့ဆုံရပါတော့တယ်။
ကိုရီးယား Saeguk တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ နိုင်ငံရေးမှာ လွမ်းဆွေးဖွယ် အချစ်ဇာတ်လမ်းက ပါးပါးလေးပါဦးမှာပါ။ ဂျိုဆွန်းခေတ်ဖိနှပ်ခံ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ အောက်ခြေလူတန်းစားတွေရဲ့ ဘဝကို မီးမောင်းထိုးပြထားပါတယ်။ MBN ရဲ့ Special Drama ဖြစ်လို့ ဇာတ်အိမ်ခိုင်မှာလည်း အသေအချာပါပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့်အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနဲ့ တနင်္လာနေ့တွေမှာ GC drama page မှာ ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်။
Original title 보쌈 - 운명을 훔치다
Last air date May. 01, 2021
zortilonrelSeptember 15, 2021Reply
A lot of of whatever you articulate is supprisingly accurate and it makes me ponder why I had not looked at this in this light previously. Your piece really did switch the light on for me as far as this particular issue goes. However at this time there is actually just one position I am not necessarily too comfortable with and while I try to reconcile that with the core idea of the issue, let me observe exactly what the rest of your subscribers have to say.Nicely done.
lpoiiJune 28, 2021Reply
Bossam: Steal the Fate အပုိင္း၁၈ကုိFHDတင္ေပးပါအျမန္
kokokjJune 28, 2021Reply
HaruJune 22, 2021Reply
Still, the links for Episodes 13 & 14 are not working.
Aye Myint KhaingJune 18, 2021Reply
down လို့ မရဘူး
kokokjJune 1, 2021Reply
FridaMay 31, 2021Reply
စန တနၤဂေႏြျပတာဆိုု တနၤလာေန႔ဆို နစ္ပို္င္းလံုးမတင္ေပးဘူးလား႐ွင့္ ေနာက္က်တယ္႐ွင့္ ဘာလို႔လဲမသိဘူး
A NyoMay 31, 2021Reply
PaingMay 12, 2021Reply
Ep4မတင်သေးဘူးလားရှင့်
cheicheiginMay 11, 2021Reply
အပိုင်း ၄ မရသေးဘူးလား . . .
Chin GyiMay 11, 2021Reply
ep4လေး မရသေးဖူး လားခင်ဗျာ့ ‌ ကြည့်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဗျာ
Ei terMay 3, 2021Reply
KnowsMay 10, 2021Reply
MKSMay 2, 2021Reply